ဇေကမ္ဘာမြန်မာအိုးပင်း ၂ဝ၁၃ ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲဖွင့်
ရန်ကုန် ဖေဖော်ဝါရီ ၂ဝ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် ကနေဒါ ပါလီမန် အတွင်းဝန် ဦးဆောင်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် ကနေဒါ ပါလီမန် အတွင်းဝန် H.E. Mr. Deepak Obhrai ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ နံနက်(၉)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီး Rt. Hon Francis Maude ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီး Rt. Hon Francis Maude ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ညနေ(၄)နာရီ (၁၅)မိနစ်တွင် နေပြည်တော် ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
စပါးဇီဝဥယျာဉ် အဆောက်အအုံအုတ်မြစ်စီ အခမ်းအနားနေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ်ရှိ ရေဆင်းစိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်၌ကျင်းပ
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ယူရေးနှင့် အာဆီယံအသိုက်အဝန်း ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ ထိပ်သီးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများ ကျင်းပရေးကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ်စည်းဝေး
ကျိုက်မရောမြို့နယ် ညောင်ပင်ဆိပ်ကျေးရွာ အ.ထ.က ၌ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း အသိပညာပေး ဟောပြော
ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန မွန်ပြည်နယ်ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော ပထမအကြိမ် ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်း အသိပညာပေးဟောပြောပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ(၁၈)ရက်က ကျိုက်မရောမြို့နယ် ညောင်ပင် ဆိပ်ကျေးရွာ အခြေခံ ပညာအထက်တန်းကျောင်း အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ ရာ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီး ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြူ၊ ဆရာ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား ကျောင်းသူ စုစုပေါင်း(၃၂ဝ) တက်ရောက်ကြသည်။
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားသူကြီးများနှင့် တရားရေးအရာရှိများ ကျမ်းသစ္စာဆို
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားသူကြီးများ၊ တရားရေးအရာရှိများ ကျမ်းသစ္စာဆိုသည့် အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီ(၁၉)ရက် နံနက်(၉)နာရီတွင် မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ မွန်ပြည်နယ် တရား လွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးခင်မောင်ကြီးက အမှာစကားပြောကြားပြီး တရားသူကြီးများနှင့် တရားရေးအရာရှိများသည် ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ရှေ့မှောက်တွင် ကျမ်းသစ္စာဆိုကြ သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသားစုဝင်များအတွက် ဆန်ရိက္ခာဖိုးထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ပွဲ ဘားအံမြို့ ဇွဲကပင်ခန်းမ၌ကျင်းပ
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့့်ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်မြတ်မြတ်အုန်းခင်သည် ကရင်ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၅)ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဘားအံမြို့ မူလတန်းကြိုကျောင်းသို့ရောက်ရှိပြီး အငယ်တန်းအဆင့်နှင့် အကြီးတန်းအဆင့် အခန်းများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကာ ကရင်ပြည်နယ် လူမှုဝန်ထမ်းရုံး၌ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမအသင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အခမ်းအနားကျင်းပ
သမဝါယမဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းသည် တိုင်းဒေသကြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ခင်၊ ဗဟိုသမဝါယမအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေး တို့နှင့်အတူ ဖေဖော်ဝါရီ(၁၈)ရက် နံနက်(၉)နာရီ ခွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သမဝါယမဦးစီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည့် သမဝါယမအသင်းများ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမောင်မြင့် မင်းကင်းနှင့်မုံရွာမြို့နယ်တို့ရှိ ကျေးရွာများသို့ သွားရောက်၍ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်